Kuthungathwa umfanyana (6) ophoseke emgodini | Scrolla Izindaba
Kuthungathwa umfanyana (6) ophoseke emgodini
Sekuphele izinsuku eziyishumi kucingwa umfanyana wase-Soweto uKhayalethu Magadla ophoseke emgodini ojulile kanti namanje akakatholakali.
UKhayalethu, obezohlanganisa iminyaka eyisithupha ngoMsombuluko, uwele emgodini ovulekile ngesikhathi edlala ibhola nabangani bakhe epaki eku-Mtambo Street eDlamini ngomhlaka-12 kuNhlangulana.
Amathimba okuthungatha nokuhlenga kuze kube manje asehambe ibanga elingaphezu kwamakhilomitha angu-13 epayipini lendle phakathi eDlamini nase-Eldorado Park ngethemba lokumthola.
I-Joburg Water nayo ingenelele ekufuneni lo mfanyana ezindaweni zokubhukuda kanye nesezindaweni ezinamapayipi endle ngoLwesibili ebusuku ukuze isize ithimba lokuthungatha nokuhlenga.
NgoLwesithathu la maqembu agubhe umhubhe ongamamitha ayisishiyagalombili ngaphezu komgodi ukuze kuvezwe ipayipi, okuthe ngemuva kwalokho kwafakwa ikhamera engena ngaphansi kwamanzi ukuze isize ukucinga lo mfanyana.
Okhulumela i-Joburg Emergency Management Services uRobert Mulaudzi uthe ingqalasizinda yomgodi iyinselelo kubatakuli njengoba ingabonakali kahle.
UMulaudzi uthe ngeledlule lolu hlelo lumenyezelwe njengolusheshayo njengoba emancane amathuba okuthi uKhayalethu atholakale.
Uyise womfana, uMnu Kholikile Magadla, uthe uzizwa engenamandla kanti akasakwazi nokulala.
“Ngihlezi ngikhona lapha ubusuku nemini uma bemcinga. Ngithandazela ukuthi ngithole ingane yami,” esho.
Imigodi ijule ngo-1.8m ububanzi obungu-1.2m kanti amanzi angcolile emapayipini ageleza aze afike ku-11km/h, okwenza abatshuzi babe nenselelo. Izinga lamanzi liphakeme ngokungavamile ngenxa yemvula njengoba nawo ebe yimbangela ngokusho kwe-TimesLive.